Mai Chibwe VekwaZimuto: Hangamwa chaidzo
Ndanga ndatokangamwa kuti ndine blog. Ndatozoudzwawo noumwe andinyorera Email. Kwahi pa blog pagarisa pasina chaitwa. Ini ndokutoita nharo kuti handina blog. Ndokuzopiwa address ini tarisei wanei ndizvo chaizvo.
Posted by Mai E Chibwe at 01:38